Sagaal waxyaabood oo laga bartay guushii ay kooxda Real Madrid ka gaartay Barcelona kulankii El Clasico – Gool FM
Waxaa xusid mudan in Real Madrid uu kaarka cas ka qaatay kulankan Ramos, ka hor inta aysan dhalin goolka guusha.
Xaqiiqooyinka kulanka El Clasico:-
>- Real Madrid ayaa guuldarradii ugu horreysay baday kooxda Barcelona, iyadoo aan laga adkaan 39 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan.
>- Zinedine Zidane ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey Real Madrid ee guul gaara kulankiisa ugu horreeya El Clasico tan iyo Macallin Bernd Schuster oo sidaas oo kale sameeyey bishii December sanadkii 2007.
>- Sergio Ramos ayaa laga saaray kulanka, waana ciyaaryahanka ugu badan ee kaarka cas qaata marka ay la dheelayaan Barcelona, iyadoo garoonka laga saaray afar jeer oo ay ka horjeedeen Barca.
>- Barcelona ayaa looga badiyey garoonka Camp Nou markii ugu horreysay tan iyo bishii February sanadkii 2015, markaaso ay garoonkan ku garaacday kooxda Malaga.
>- Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey 13 gool 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ka soo muuqday horyaalka La Ligaha Spain.
>- Karim Benzema ayaa u dhaliyey Real Madrid 21 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, kaliya Cristiano Ronaldo oo 28 gool dhaliyey ayaa ka badan.
>- Karim Benzema ayaa 8 gool ka dhaliyey Barcelona waa kooxda labaad ee uu ugu jecleyahay inuu gool ka dhaliyo, kaliya waxaa uu hal gool ka badan oo ah kooxda uu ugu jecel yahay Granada oo uu ka dhaliyey 9 gool.
>- Kooxda Real Madrid ayaa shabaqeeda ilaashatay kaliya hal jeer sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Ligaha Spain, inta kale gool ayaa laga dhalinayey oo garoonka kama baxaynin iyadoo shabaqeedu nadiif yahay.
>- Xiddiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guuldarreystay inuu gool ka dhaliyey Real Madrid kaasoo noqon lahaa goolkaas kiisii 500-aad uu xirfaddiisa koox iyo xulba dhaliyo, laakiin hadda waxa uu Lio weli leeyahay 499 gool.